Họrọ okpu ịwụ onye ọkụ azụ dịka ọdịdị nke ihu gị
Họrọ okpu bọket na-akụ azụ dị ka ọdịdị nke ihu gị Hat bụ akụkụ dị mkpa nke ọdịdị mara mma, agbanyeghị oge. Mgbe a bịara n’ịhọrọ okpu maka oge, echeghị m na enwere ihe dị mma karịa okpu onye ọkụ azụ? Nwere ike ọ bụghị naanị ndo, kamakwa ea ...
Golf 2021 ndu / ndu ndu nke ndu: nkpu kacha mma, ihe nlere nke anwu
N'oge na-adịbeghị anya anyị wepụtara "Ntuziaka Oge opupu ihe ubi / oge ọkọchị 2021", nke na-akọwa ọdịdị kachasị mma maka ụdị golf ọ bụla (egwuregwu, oge ezumike, nkwadebe, wdg). Izu a, anyị na-ekwu maka okpu na ihe nkpuchi ihu. Anyị na-enye ihe niile site na okpu nna, ịwụ bọket, okpu njem, okpu eriri, wdg ...
ka anyị kwuo maka Sun Hat
The kacha mma anyanwụ okpu bụ na-abụghị-nzuzo staple nri, na ya mmetụta bụ nnọọ ihe karịrị ọdịdị na-amasị gị. Ha na-enye nchebe anyanwụ ọzọ ma gbochie ụzarị ọkụ UV na akpụkpọ, anya na ntutu. Ihe kachasị mma bụ na a na-enye ọtụtụ ụdị, yabụ na ị gaghị etinye aka na ...
Nwanyị Lady Gaga na ndị na-eme okpu Brad Pitt guzobere ụlọ ahịa na Oxford
Mgbasa ozi ndị a na-enyere ndị azụmahịa nke obodo aka ịpụta n'etiti ndị na-ege ha ntị (obodo). Ọ dị mkpa na anyị ga-aga n’ihu ịkwalite mgbasa ozi ndị a, n’ihi na ụlọ ọrụ ndị dị n’obodo anyị chọrọ nkwado dị ka o kwere mee n’oge a tara akpụ. Ihe mkpuchi okpu nke kere isi maka Lady Gaga ...
Nchịkọta maka okpu
site ha na 21-05-05
Mkpokọta maka okpu Collocation of hats kwesịrị ịtụle agba nke anyị. Agba nke okpu ahụ ga-ekwekọ na agba nke anụ ahụ, dịka ọmụmaatụ, ndị nwere akpụkpọ anụ adịghị adabara ịhọrọ okpu mara mma nke agba, yana ịhọrọ ala dị ọcha nke etiti agba okpu. maka ule ...
Okpu mmiri a na-enweghị mmiri na-echebe okpukpu isi n'èzí
Melin okpu Melin dị fechaa ma bụrụ ezigbo enyi maka ọrụ niile dị n'èzí. Mgbe ị na-atụrụ ndụ n'akụkụ ọdọ mmiri ma ọ bụ n'ụsọ osimiri, kpuchido isi gị site na okpomọkụ. Echegbula na ọ ga-ada mgbe oge gasịrị, n'ihi na ihe ha niile dị elu ma sie ike! Anyị tii ...
Otu n'ime okpu ndị anaghị eri anụ nwere ike ime ka mma gị zuo oke
Ma ụbọchị gị ọ bụ ntutu isi adịghị mma, mkpuchi anwụ, ma ọ bụ ntị oyi, okpu nwere ike ịdị mma mara mma. Ma obi ọjọọ abụghị ihe mara mma. Ọ dabara nke ọma, enwere okpu vegan maka oge ọ bụla-anyị nyere gị nduzi na ihe ndị a niile. N'ezie, enwere akara ngosi mara mma karịa baseball ca ...
Kedu agba bụ okpu kacha mma iji eyi n'oge ọkọchị?
Kedu agba bụ okpu kacha mma iji eyi n'oge ọkọchị? N'oge ọkọchị ọtụtụ mmadụ na-achọ ịpụ ịkpa okpu, n'ihi na ọ nwere ike ọ bụghị naanị ịkwalite ndepụta ejiji ha, ma nwee ike weta mmetụta nke anwụ ha. Mmetụta dị mma? Uhie ...
Timothée Chalamet gosipụtara na okpu ịwụ dị ebe a
Onye ọ bụla nwere ntutu na-adịghị mma dị ka onye na-eme ihe nkiri 24 bụ Timothée Chalamet (Timothée Chalamet) maara na mgbe ụfọdụ, curls ndị ahụ na-apụ apụ, na-eme ka isi ya sie ike ijikwa. Chalamet na-adaberekarị na headgear iji kpuchie akpụ akpụ ya na-enweghị isi: ọ na-eyi Elara Pictu ...
Smart ERP usoro ọzụzụ
(1) Nye usoro ihe omuma agbakwunyere iji ghọta data azụmahịa na ịkekọrịta ozi. (2) Mee usoro nhazi azụmaahịa ma dezie ya, kpochapụ ọrụ abụọ na nhazi azụmahịa, nweta ọkọlọtọ na nhazi nke nhazi azụmahịa, nye njikọta data na arb ...